Gacan-gacmeedka RFID, Alaabta NFC, Kaarka PVC, Kaarka Birta - Warshada Chuangxinji.
13.56mhz ISO14443A Xakamaynta Helitaanka ABS RFID NFC ...
Daabacaadda habaysan ee kaadhadhka hadiyadda daacadnimada caaga ah ee PVC
Kaarka PVC-ga ah ee loo habeeyay ee NFC-MIFARE Ultralig...
Microchip Tiny mini birta NFC sticker FPC NF...
Shaqada Amniga rfid ilaalinta birta nfc tag
Istiikarada RFID maran ee ku yaal Tag qadaadiicda NFC ee birta ah
Ku dheji dhejiyeyaasha PVC PET RFID adag oo ku yaal ntag2 birta ah ...
Ammaanka Ntag213 rfid roondo ka hortagga birta si ay u...
Micro fpc ntag213 yar yar oo bir ah dia10mm n ...
La aasaasay sannadkii 2001, Shenzhen Chuangxinji kaadhka smart co., Ltd wuxuu ku takhasusay soo saarista
iyo suuq-geynta kaarka PVC, kaarka RFID, jijin NFC iyo RFID Tag iwm.
Haysashada saddex khad wax soo saar oo casri ah oo heer sare ah:
Khadka wax soo saarka kaadhka PVC oo leh wax soo saar bille ah oo ah 20,000,000 oo kaarar ah: Mashiinnada CTP-ga cusub iyo mashiinnada daabacaadda ee Heidelberg, 8 mashiinnada isku dhafan.
Khadka wax-soo-saarka anteenada oo leh wax-soo-saar bille ah oo ah 20,000,000 oo kaarar ah: duub oo lagu duubo mashiinnada daabacaadda, mashiinnada isku-dhafka ah, mashiinnada nabaad-guurka iyo xardho-qoraalka.
Khadka wax soo saarka ee RFID oo leh wax soo saar bille ah oo ah 500,000,000 kaararka smart iyo 300,000,000 RFID tags: mashiinnada isu-ururinta ee isku dhafka ah ayaa ku dhinta mashiinnada goynta, mashiinnada laminating.
Waxaan leenahay 6 shaqaale suuqgeyn ah oo ku hadla Ingiriisiga, Jarmalka, Faransiiska, Isbaanishka, Carabiga iyo wixii la mid ah, ganacsigeenu wuxuu ka yimaadaa Yurub, Ameerika, Oceania, Afrika, Aasiya iyo wadamada bariga dhexe iyo gobolada.
Xalka dhegta xayawaanka RFID
Metro RFID Kiiska Guusha Kaadhka
Qatar Airlines caag pvc boorsooyinka Tag
Calaamadaha dharka lagu dhaqo RFID
Kani waa qaar ka mid ah warkii ugu dambeeyay ee shirkaddayada. Waxaan cusbooneysiin doonaa qaar ka mid ah wararka shirkadda, maqaallada warshadaha, iyo maqaallada ugu jeexjeexay cutubkan waqti ka waqti ... Waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno qaybahan, waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay.
Waa maxay faa'iidooyinka nidaamka maaraynta bakhaarka RFID?
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dhabta ah ee hadda jirta ee qiimaha sare iyo waxtarka hoose ee isku xirka bakhaarka, iyada oo loo marayo baaritaanka o...
Sida aan wada ognahay, codsiga RFID ee warshadaha dharka ayaa noqday mid caan ah, oo keeni kara imminka weyn ...
RFID aqoonta aasaasiga ah
1. Waa maxay RFID? RFID waa soo gaabinta Aqoonsiga Soo noqnoqda Raadiyaha, yacni, aqoonsiga inta jeer ee raadiyaha....
Farqiga iyo xidhiidhka ka dhexeeya RFID firfircoon iyo dadban
1. Qeexida Active rfid, sidoo kale loo yaqaan rfid firfircoon, awooddeeda hawlgelineed waxaa si buuxda u bixiya batteriga gudaha.